रैथाने स्वादः यसरी बनाउने पाल्पाली चुकाउनी::आर एम खबर
रैथाने स्वादः यसरी बनाउने पाल्पाली चुकाउनी
तपाईं पाल्पा जाँदै हुनुहुन्छ ? कुनै पाल्पाली कहाँ पाहुन लाग्नुभएको छ ? त्यसो भए तपाईंले छुटाउनै नहुने कुरा छ, चुकाउनी । अर्थात पाल्पाली चुकाउनी । शहरका कतिपय भोजनालयमा पनि तपाईंले यो परिकार पाउनुहुनेछ । तर, पाल्पाको रैथाने स्वाद पो नमिल्ने हो कि ? पाल्पालाई चिनाउने दुई कुरा छन्, कपडा र खानेकुरा । पहिलो, पाल्पाली ढाका । दोस्रो, पाल्पाली चुकाउनी । नेपालले विश्व बजारमा निर्यात गर्ने स्वदेशी उत्पादन हो, पाल्पाली ढाका । अहिले शहरका फेसन बजारमा पनि ढाकाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । कतिपय फेसन डिजाइनरले ढाकालाई महत्व दिएका छन् । त्यसैगरी तिहार जस्ता पर्वमा पनि ढाकाको टोपीले उच्च महत्व पाउने गर्छ ।
आलुलाई धेरै नगल्ने ढंगले उसिन्नुपर्छ । त्यसलाई स-सना टुक्रामा काट्ने । यसरी टुक्रा बनाएको आलुमा नुन राख्ने । काटेर टुक्रा बनाएको प्याज मिसाउने ।अब यसमा छोप लगाउनुपर्छ । छोपको लागि सिलाम वा तील पिँधेर उक्त आलुमा मिसाउनुपर्छ ।तोरीको तेल तताउने । त्यसमा केही मेथी फुराउने र आलुको माथिबाट राख्ने । त्यसैगरी रातो खुर्सानी र बेसार झानेर आलुमा खन्याउने ।अब आलुमा ति सबै कुरालाई मजाले घोलेर दही मिसाइदिने । त्यसमाथि ताजा कागतिको रस चुहाउने । धनियाँको पातलाई माथिबाट छर्किने ।चुकौनी यसरी तयार हुन्छ । यसलाई तपाईं आफ्नो मर्जी अनुसार भात, रोटी आदिसँग खान सक्नुहुनेछ ।